Chitatu 6 Chikunguru 2022
Hurukuro naVaPupurai Togarepi PAP Elections
Hurukuro na Dr Ricky Mukonza- PAP Elections
Ndira 23, 2022
Akafanobata chigaro chemurairidzi wechikwata chemaWarriors, Norman Mapeza, anoti chikwata chake chakagumbura zvikuru nyika nekutadza kwachakaita kupinda munharaunda yechipiri yemakwikwi eAfrica Cup of Nations, Afcon, kuCameroon.
Senegal Inorova Zimbabwe 1-0
Chikwata cheZimbabwe chemaWarriors chiri mukuchema mushure mekurohwa neSenegal mumutambo wacho wekutanga weAfcon 2021 .
Zvinhu Hazvina Kumira Zvakanaka Mugadziriro yeZimbabwe Kuenda kuMakwikwi eAfcon
Vatambi vakawanda vane mukurumbira kusanganisira Marvelous Nakamba weAston Villa nevamwe vangangotadza kunomirira nyika kumakundano eAfcon 2021 aya nemhaka dzakasiyana-siyana.
Hurumende yeBritain yazivisa kuti yambomisa kuti ndege dzinobva muZimbabwe nedzimwe nyika shanu dziri kuchamhembe kweAfrica kuti dzimhare munyika iyi kusvika nemusi weSvondo zvichitevera kuwanikwa kweimwe mhando yehutachiwana hweCovid 19 kuSouth Africa nekuBotswana.
Zvizvarwa zveZimbabwe Zviri muSouth Africa Zvoshushikana neKupera Kushanda kweMvumo yeZimbabwe Exemption Permits
Nyaya yemagwaro anobvumidza zvizvarwa zveZimbabwe kugara nekushanda muSouth Africa zviri pamutemo, kana kuti Zimbabwe Exemption Permits, yotsviriridza zvakare munyika iyi zvoita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvigare zvakabatira ura mumaoko, sezvo magwaro aya ari kupera kushanda mukupera kwegore rino
Bato reMDC Alliance nhasi rakurudzira sangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica, reSouthern African Development Community, kana kuti SADC, kuti rive mutongigava pagakava riri munyika zvichitevera kurudziro yesangano iri yekuti paitwe nhaurirano munyika.
Zimbabwe Netball Team Yogadzirira Mitambo Yayo Ichaitirwa kuNamibia
Chikwata cheZimbabwe Netball team chiri mukamba umo chiri kugadzirira makundano ePent Series neAfrica Netball Championships ayo achatambirwa mu Windhoek, kuNamibia.
Hurumende Inoti Ine Varairidzi Vakawanda Zvekupa Dzimwe Nyika muAfrica
Asi mutungamiri werimwe sangano revarairidzi, re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, VaObert Masaraure, vanoti kunyange hazvo mashoko aVakagame achifadza varairidzi, Zimbabwe haikwanise kupa dzimwe nyika varairidzi.
Mumwe murimi anga achitenga mbeu yake pachitoro cheMetro Peech nhasi muChinhoyi, Amai Bhurandina Nyakutera, vati mbeu iri kudhura zvekuti havasi kurima zvavaitarisira gore rino.